Maxkamadeyntii wariyaasha Shabeelle oo dib u dhacday (Sababta?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamadeyntii wariyaasha Shabeelle oo dib u dhacday (Sababta?)
5th January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Waxaa dib u dhac ku yimid maxkamadeynta wariyaasha radio Shabeelle iyo SKY FM, dacwadaas oo maanta loo ballansanaa.
Wariyeyaasha kala ahaa Maxamed Bashiir Xaashi iyo Maxamuud Dahir Carab oo xabisga ku jira, iyo Milkiilaha Idaacada Shabelle C/maalik Yuusuf Maxamuud iyo Axmed Cabdi xasan oo damaanad banaanka ku joogay ayaa maanta la horkeenay maxkamadda, hase ahaatee waxaa baaqday qareenkii dadkaas difaacayey.
Agaasimaha Idaacada Shabelle Maxamed, Muuse Maxamed oo warbaahinta kula hadlay xarrunta maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa sheegay in qareenkii eedeysanayaasha difaacayey la waayey.
Maxamed Muuse ayaa sheegay inuusan garan karin sababta uu Qareenka u maqan yahay, isla markaana uu ahaa nin muddo badan la soo shaqeeyay.
“Maanta waxaa loo balansanaa dawacadii mudada dheer aan sugeynay in la qaado oo ah Wariyeyaashii Idaacada Shabelle oo muddo shan bil ka badan ku xiran Xabsiga Dhexe, waxaa nasiib daro aheyd in Qareenkii na matalayay aanu imaan, arrintaasna waxay sababtay in dacwadii Maxkamada la joojiyo”ayuu yiri Maxamed Muuse Agaasimaha Shabelle.
“Qaareenkii aan la heshiinay ee aan lacagta siinay, shalayna aan isla hadleynay ayaa inoo gooyey, waxaana sameyn doonaa wixii looga dacwoodo qareen kula heshiiyey ee kaa baaqday” ayuu sidoo kale yiri Maxmed Muuse.
Dhanka kale, waxaa ciidamada amanka Soomaaliya maanta sii daayeen Madaxa Barnaamijyada Goobjoog FM, Maxamed Salaad Cimssan iyo Wardoone Ibraahim Xaaji Yuusuf oo shalay ay xireen ciidamo ka mid ah dowladda Federaalka, xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo.
Wariyaasha ayaa lasoo daayay iyaga oo bad qaba, islamarkaana aanay jirin wax dhibaato ah oo ay kala kulmeen ciidamada dowladda saacadihii ay xurriyad la aanta ahaayeen, sida ay iyagu sheegeen.
Wariye Maxamed Salaad Cismaan iyo Ibraahim Xaaji Yuusuf waxaa shalay laga xiray wadada 21 October xilli ay warar kasoo tabinayeen Qarax shalay ka dhacay halkaasi.
Alshabaab oo raba iney ka aargutaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan
Baledweyne: Alshabaab oo lagu eedeeyey qafaalka 7 gaadiid ah